WINE 5.18 inotsigira modhi dzekuratidzira dzakasiyana siyana | Linux Vakapindwa muropa
Yakatendeka uye inobata nguva kumusangano wayo wevhiki mbiri, WineHQ nezuro yakaparura vhezheni itsva yesoftware yekumhanyisa Windows mafomu pane asiri maMicrosoft anoshanda masisitimu, seLinux. Panguva ino, ndezve WAINI 5.18, iyo vhezheni inotevera iyo v5.17 uye kuti haina kumira kuti ive imwe yeakakura munhoroondo yesoftware, asi zvirinani ivo vakataura zvimwe zvakatanhamara nhau kupfuura zvakaburitswa zvakapfuura.
Kazhinji, WineHQ inowanzo kutitaurira pakaburitswa yega nyowani vhezheni yetatu kana ina yakasarudzika mitsva, iyo iyo inowedzera zvakajairwa "zvakasiyanasiyana bug fixes". Vhiki rino, rondedzero yacho yakati rebei, sezvo vakamira kunze 6 + 1, asi zvisina kunyanya kukosha Kune rimwe divi, ivo vakagadzirisawo makumi mana nemasere uye vakaunza 264 kuchinja. Pazasi pauinazvo iyo rondedzero yezvakakurumbira zvitsva kubva kuWINE 5.18 iyo WineHQ yakataurwa.
WINE 5.18 inosimbisa
Muunganidzwa wevolkan shader uchishandisa iyo nyowani vkd3d-shader raibhurari.
USER32 raibhurari yakashandurwa kuita PE.
Iyo koni haichadi raibhurari yekutuka.
Tsigiro yemamodhi ekuratidzira ane akasiyana mafambiro.
Yakasiyana syntax inogadzirisa muWIDL compiler.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 5.18 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y iyi imwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iyo yepamutemo chirongwa repositi kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa mune ramangwana pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune zvekare mavhezheni e Android uye macOS.
Iyo inotevera yekuvandudza vhezheni ichave WINE 5.19 uye, kana pasina zvinoshamisira, chimwe chinhu chinoratidzika kunge chisingakwanisike kuitika pane WineHQ ajenda, iyo inotevera Gumiguru 9. Pakati pekuvandudzwa kwazvichaunzwa, chinhu chega chatinogona kukuvimbisa ndechekuti ivo vanozounza mazana ediki diki ekugadzirisa uye kugadzirisa senguva dzose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 5.18 inosvika nerutsigiro rwema modes ekuratidzira ane akasiyana mafambiro
Debian 10.6 inosvika, pamusoro pezvose, kugadzirisa zvikanganiso zvekuchengetedza